China Multi-tier Mezzanine umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
1. I-mezzanine ye-Multi-tier, okanye ebizwa ngokuba yi-rack-support mezzanine, inefreyimu, i-step beam / ibhokisi yebhokisi, ipaneli yentsimbi / umnatha wocingo, i-flooring beam, i-flooring deck, i-staircase, i-handrail, i-skirtboard, ucango kunye nezinye izixhobo ezikhethiweyo ezifana ne-chute, phakamisa kunye njl.
2. I-Multi-tier inokwakhiwa ngokusekelwe kwisakhiwo se-shelving emide okanye i-pallet yokukhetha i-racking structure.
Uhlobo lweRacking: I-mezzanine enemigangatho emininzi
Ubungakanani: eyenziwe ngokwezifiso Iyalayisha: 200-2000kg kwinqanaba ngalinye
I-pitch 50mm/75mm Indawo yemvelaphi Nanjing, China
Isicelo: isetyenziswa kakhulu kwindawo yokugcina enkulu enemfuno enkulu yokugcina kunye nokugcinwa ngesandla kwemithwalo emincinci, umzekelo, ii-auto spare parts, isixhobo se-electron kunye njl.
I-mezzanine enemigangatho emininzi iyilwe njengesakhiwo esivulekileyo.Inzuzo enkulu ifanelekile kwisitokhwe esipakishiweyo, esinika ukubonakala okuphezulu kwezinto ngaphandle kweendawo zeshelufu ezabelwe.Oko kuququzelela umqhubi ngokufanelekileyo kwendawo kunye nokufikelela ngokukhawuleza.
Amanqanaba amaninzimezzanineinokwakhiwa njengemigangatho emibini nangaphezulu, isenza umthamo wogcino kabini, kathathu okanye ngaphezulu, ngokusebenzisa indawo yokugcina impahla ephezulu ngokwaneleyo., ngaphandle kwemfuneko yomgangatho owahlukileyo we-mezzanine.
I-Multi-tier mezzanine yakhiwe ngokusekwe kwisakhiwo seshelving emide, okanye i-pallet ekhethiweyo yokupakisha.I-Plus floor beam, i-floor deck, i-staircase, i-handrail, i-skirtboard kunye nezinye izixhobo, ulwakhiwo lokukhwela luzinzile kwaye luqinile.Ukukhethwa kweentlobo zemigangatho ziyafumaneka ukuze zihambelane neemfuno ezahlukeneyo.
④ Uhlengahlengiso oluguquguqukayo
I-Multi-tier mezzanine ilula ukufakwa kunye nokuchithwa, kwaye ivumela ukulungiswa okuguquguqukayo kwamanqanaba okukhwela ngokuhambelana nemfuneko yokugcinwa kwangempela, enceda ukudala iindawo ezithile zeeshelufu ukuze zilungele isitokhwe esigcinwe.
Xa kuthelekiswa nokufudukela kwindawo entsha, okanye ukwandisa isakhiwo sangoku, i-mezzanine enemigangatho emininzi ixhasa ukwakha imigangatho kunye neshelufu njengenye, eyonga kakhulu iindleko, ixesha kunye nabasebenzi.
Ngaphambili: Longspan Shelving
Okulandelayo: I-Pallet Racking ekhethiweyo
Asrs Ugcino, Umhambisi, I-Four Way Shuttle, ICarton Live, Qhuba kwi Racking, IShuttle yomntwana,